IOS 15 waxay wanaajisaa jiidista iyo hoos u dhaca iyadoo lagu darayo sawirro iyo qoraal | Wararka IPhone
Angel Gonzalez | 18/06/2021 22:00 | macruufka 15
Jiid iyo hoos u dhac ayaa noqon kara mid ka mid ah xulashooyinka ugu xiisaha badan ee IOS ee aan gacanta ku hayno. Kala duwanaanta awood u lahaanshaha la falgalka waxyaabaha kala duwan ee u dhexeeya codsiyada waa mid ka mid ah tiirarka aasaasiga u ah dheecaanka nidaamka hawlgalka. Intaas waxaa sii dheer, imaatinka IOS iyo iPadOS 15 Apple waxay rabtay inay talaabo hal talaabo ah usii qaado iyadoo la kordhinayo faa iidooyinka Drag iyo Drop. Laga bilaabo hadda, waxaan kula macaamili karnaa dukumiintiyada, sawirada, qoraalka qaab hal ama dhowr ah oo udhaxeeya codsiyada kala duwan. Intaas waxaa sii dheer, waxyaabaha la soo xulay waxay ka imaan karaan barnaamijyo kala duwan oo iyadoo hal far kaliya aan kula falgaleyno waxa ku jira, dhinaca kalena aan sameyn karno dhaqdhaqaaqyo.
Tani waa shaqada jiita iyo hoos udhaca ee macruufka 15
Iyada oo taageero loo siinayo jiidista iyo hoos u dhaca codsiyada, waxaad ka dooran kartaa sawirro, dukumiinti iyo faylal hal codsi oo u jiidi kartaa mid kale.
IOS 15 waxay wanaajisay xulashada Jiid iyo Soo Dhicis oo horeyba loogu heli jiray macruufka 14. Waxyaabaha cusubi waxay kujiraan walxaha sii kordhaya kaas oo aan kula macaamili karno. Hadda waxaan ku dari karnaa ku dhowaad wixii ku jira shaqada: sawirada, qoraalka, fiidiyowyada, dukumiintiyada, iwm. Intaa waxaa sii dheer, waxaan ka faa'iideysan karnaa codsiyo kala duwan si aan u dooranno xubno kala duwan oo aan si otomaatig ah u leenahay.
Apple wuxuu dib u habeyn ku sameeyaa kantaroolaha ciyaarta fiidiyowga ee iOS 15
Si tan loo sameeyo, waxaan ku dooran doonnaa curiyaha ugu horreeya farta oo hoos u dhigeynaa. Dhinaca kale waxaan u isticmaali karnaa tilmaamo fara badan si aan codsiyada ugu beddelno. Markaad ku dhexjirto barnaamij kale, weli fartaada oo leh curiyaha koowaad ee la xushay, waxaan dooran karnaa xubno badan iyo markaan sii deyno, waxay u hoggaansami doonaan cunsurka ugu horreeya ee lagu soo xulay qaab isku duuban.
Sidoo kale, in la dhammeeyo ficilka waan heli karnaa arjiga loo socdo halkaas oo kaliya joojinta riixitaanka waxaan uga tagi karnaa dhammaan dukumiintiyada, fiidiyowyada, sawirrada ama feylasha iyadoo kuxiran isticmaalka aan siin doonno. Kordhinta shaqadan cusub waxay u oggolaaneysaa fiitamiin macruufka 15 inay ku soo lifaajiso walxaha codsiyada kala duwan emaylkeena, tusaale ahaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 15 » IOS 15 waxay sare u qaadaa shaqada 'jiididda iyo dhicida' iyadoo lagu darayo sawirro iyo qoraal
YouTube-ka "Picture in Picture" wuxuu ku yimaadaa macruufka